समाचार - प्रेरण कुकर वर्गीकरण ज्ञान
भान्साकोठामा, इन्डक्शन कुकर भान्साका सामानहरू मध्ये एक हो जुन धेरै सामान्य छ। तर इन्डक्शन कुकरको वर्गीकरणको लागि तपाईं एक एक गरेर स्पष्ट हुनुहुन्छ? हाम्रो साधारण इन्डक्शन कुकर के हो? निम्न लेखले इन्डक्शन कुकरको वर्गीकरण विवरणको बारेमा वर्णन गर्दछ, होशियार!
इन्डक्शन कुकरको पावर अनुसार घरेलु इन्डक्शन कुकर र कमर्शियल इन्डक्शन कुकरमा बाँड्न सकिन्छ। फर्नेस हेडको वर्गीकरणको आधारमा डोमेस्टिक इन्डक्शन कुकरलाई सिंगल कुकर, डबल कुकर, मल्टी कुकर र एक बिजुली एक ग्यासमा बाँड्न सकिन्छ।
इन्डक्शन कुकरको पावर अनुसार घरेलु इन्डक्शन कुकर र कमर्शियल इन्डक्शन कुकरमा बाँड्न सकिन्छ।
एकल कुकरको वर्किंग भोल्टेज १२०V-२0०V हो, र सबैभन्दा सामान्य भनेको १ 00 ००० W-२२०० डब्लु हो, जुन पारिवारिक खाना पकाउन व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो प्रारम्भिक रूपमा विकसित भएको छ र हाम्रो देशमा व्यापक रूपमा प्रयोग भएको छ।
डबल-हेड भट्टीको कार्य भोल्टेज पनि १२०V-२0०V हो। हाल आन्तरिक बजारमा एउटा सपाट र एउटा अवतल र दुई सपाट व्यक्तिहरू छन्। सामान्य एकल कुकरको शक्ति २१०० डब्लु हो, र एकै समयमा काम गर्ने डबल कुकर 35 35००W भन्दा बढि छैन।
बहु कुकर, सामान्यतया दुई इन्डक्शन कुकर प्लस अवरक्त कुकरको लागि। लागू अवसरहरू: कुनै पनि ठाउँमा जहाँ परम्परागत स्टोभ प्रयोग गरिन्छ, जस्तै अस्पताल, कारखाना र खानहरू, होटलहरू, रेस्टुरेन्टहरू, कलेजहरू र विश्वविद्यालयहरू, संस्थाहरू, आदि; विशेष गरी अवसरहरूको लागि उपयुक्त)। ईन्धन आपूर्ति वा प्रतिबन्धित ईन्धन प्रयोग बिना, जस्तै बेसमेंट, रेलवे, सवारी साधनहरू, जहाजहरू, उड्डयन र अन्य चीनको विकास, विशेष गरी विद्युतीय उर्जाको तीव्र विकास, यो उच्च-शक्ति वाणिज्यिक प्रेरण कुकर व्यापक रूपमा प्रयोग हुनेछ।
एक बिजुली एक ग्यास
एक बिजुली एक ग्यास प्रेरण कुकर र ग्यास चुल्ती उत्पादनहरूको मिश्रण हो, एक भट्टी हेडले परम्परागत ग्यास प्रयोग गर्न सक्दछ, अर्को फर्नेस हेडले प्रेरण कुकर प्रयोग गर्दछ, सामान्य पावर २१०० डब्लु, दुई बर्ष उदाउँदो उत्पादनहरू हुन्।